Macallin Ralf Rangnick oo caddeeyay sababtii uu uga soo tagay Cristiano Ronaldo ciyaartii xalay Man United ay barbarraha la gashay Aston Villa – Gool FM
(Manchester) 16 Jan 2022. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xalay kulan ciyaareed ka tirsan horyaalka Premier League booqatay naadiga Aston Villa taasoo ku dhammaatay barbarro 2-2 ah, waxaase kooxdii martida ahayd ka maqnaa xiddigooda weyn ee Cristiano Ronaldo.
Si kastaba ha ahaatee, macallinka naadiga Man United ee Ralf Rangnick ayaa sharraxayay sababtii uu xalay safkiisa uga soo reebay weeraryahankiisa CR7, waxaana isagoo la hadlayay Sky Sports ayuu sheegay inuu laacibkiisa weli la xanuunsanayo dhaawac kasoo gaaray sinta.
“Waxa uu u maqnaa sabab la mid ah sababtii uu ku seegay kulankaa FA Cup-ka, shalay tababarka kahor, waxa uu xanuun ka dareemayay sinta, sidaas darteed, waxaan go’aansannay inuusan tababar sameynin, kaddibna waan sheekeysannay, waxaana isku raacnay inuu kulankan seego si uu ugu yaraan taam ugu noqdo kulanka Brentford” ayuu yiri macallinka Jarmalka ah.
Intaas kaddib, Tababare Rangnick ayaa go’aansaday inuu safkiisa kusoo daro Anthony Elanga kaasoo kusoo bilawday kulankiisii ugu horreeyay ee Premier League, waxaana shaxdiisii 4-2-2 ahayd uu u rogay 4-2-3-1.
Qoyska Lionel Messi oo doonaya inuu laacibka Paris Saint-Germain ku laabto Barcelona & Aabbaha dhalay xiddigan oo...